I-Ultrasonically-assisted Chemical Synthesis - iHielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "Ukuhlanganiswa kwamakhemikhali kungathuthukiswa kakhulu yi-sonication"
I-Chemical synthesis ukusabela kwamakhemikhali ngenhloso yokuguqula ukuguqulwa okukodwa noma okuningi kube umkhiqizo owodwa noma amaningi.
Amagagasi e-Ultra amakhulu angasetjenziswa ukwenza ngcono ukuvela kwamakhemikhali (ie synt syntase and catalysis) – insimu eyaziwa ngokuthi i-sonochemistry. Umphumela we-ultrasound ekuphendukeni kwamakhemikhali ususelwa esizukulwaneni se-acoustic cavitation ku-liquids. I-Sonication ingenisa amandla engxube yamakhemikhali, ikhiqiza izimo zasendaweni ezedlulele ngenxa ye-cavitation futhi ikhuthaza ukudluliselwa ngobuningi. Ngaleyo ndlela, ingandisa kakhulu imiphumela yamakhemikhali enjenge-synthesis (sono-synthesis) kanye ne-catalysis (sono-catalysis). Amandla e-Ultrasonic angakhuthaza futhi asheshise ukusabela, akhuphule izinga lokuguqulwa futhi asungule ezinye izindlela zokwenziwa. Njengomphumela walokho, i-ultrasound ingenza ukusabela kokuqamba kuphumelele, kusheshe futhi kube nobungani bemvelo.
Imiphumela yokusabela ye-Ultrasonically-esiza-synthesis efana ne-sono-synthesis ye-hydroxyapatite, i-nanoparticles yesiliva, Mn.3O4ama-nanoparticles nezinhlobonhlobo eziningi zezinhlayiya eziyisisekelo-igobolondo zifundwe kabanzi futhi zafinyelela ngempumelelo ekukhiqizeni usayizi wezimboni.
I-Sonochemistry yinkambu yamakhemikhali lapho i-high-intensity ultrasound isetshenziselwa ukuheha, ukusheshisa nokuguqula ukuphendula kwamakhemikhali (synthesis, catalysis, degradation, polymerization, hydrolysis njll). I-cavitation eyenziwe nge-Ultrasonically ibonakala ngezimo ezihlukile zamandla aminyene, ezikhuthaza futhi ziqinise ukusabela kwamakhemikhali.…